इतिहास साक्षी छ, देउवाले प्रचण्डको टाउकोको मूल्य तोकेर सुरक्षा निकाय परिचालन गरेका थिए । तिनै प्रचण्डले बर्दियाबाट फर्कदै गरेको देउवामाथि बम प्रहार गरेर सिध्याउनै खोजेका थिए । त्यो विगत अव बाँकीरहेन, यतिबेला यी दुबै उत्तर दक्षिणी ध्रुवका सिद्धान्त बोकेका व्यक्तिहरु एकदोश्राका सहयोगी बनेका छन् र हातेमालो गरेर अघि बढेको देखिन्छ । देश, पार्टी कार्यकर्ता र तिनका समर्थकहरु खुशी हुन् कि नहुन्, यी दुवै नेता अत्यन्त खुशी छन् ।
वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचनको पहिलो चरण । कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई हँसिया र हथौडा चुनाव चिन्हमा छाप लगाएर मतदान गर्न आदेश दिए । भरतपुरमा यस्तै भयो र कम्युनिष्ट नेता प्रचण्डले कांग्रेसको रुख चिन्हमा छाप लगाएर मतदान गरे । एउटा समाजवादी, अर्को जनवादी, यी दुबैको केमेष्ट्रीले नेपाली राजनीतिमा अचम्म भइरहेको छ । यो अचम्म, यो तालमेलको राजनीतिले ल्याउने नतिजा पनि अचम्मै हुनेवाला छ ।
यस्तो राजनीति जनताले बुझ्ने राजनीति होइन । किनभने जनता पनि अचम्मका छन् । राजनीतिभित्रको राजनीति जनताले कहिल्यै बुझेनन्, बुझेर पनि वास्ता गरेनन् । सोझा जनतालाई नेताहरुले च्यापटी घुमाएझैं घुमाइरहे ।
प्रचण्डले रुखमा भोट हाल्नु र देउवाले हँसिया हथौडामा मतदान गर्नु चानचुने घटना होइन । नेपालको इतिहासमा लामो समय यो घटनाको चर्चा भइरहनेछ र यो एकताले अर्थ राख्नेछ र अनर्थकारी नतिजा दिइरहनेछ ।
चुनाव भनेको सिद्धान्त मिल्नेसँग तालमेल गर्ने हो । मिलेर चुनाव लडेर सामुहिक रुपमा आफ्ना एजेन्डाअनुसार काम गर्ने हो । कहाँ भोज, कहाँ गंगु तेली, कहाँ कांग्रेस, कहाँ माओवादी केन्द्र ? यस्ता विपरित ध्रुवका पार्टीहरुवीच पनि तालमेल भएर चुनाव लडियो । त्यो पनि स्थानीय तहमा । यति साह्रै नकाम चाहिं नगरेको भए पनि हुनेथियो । किनभने यसले राम्रो सन्देश जाँदैन । सबैले बुझ्न पाए कि हाम्रा दुवै थरि नेताहरु सत्ता र शक्तिका लागि जस्तोसुकै तालमेल गर्न पनि पछि नपर्ने रहेछन् । अन्यथा राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा, राष्ट्रियनीतिमा सहमति र सहकार्य गर्न नसक्नेहरु स्थानीय चुनावमा आफ्ना छोरी, नातेदारलाई जिताउनकै लागि सिद्धान्तविपरित चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न सक्छन् भने यिनले स्वार्थसिद्धिका लागि जस्तोसुकै राष्ट्रघात पनि गर्न सक्छन् भन्ने अर्थ लाग्दैन र ?
तर जे भयो, भयो । आगामी दिनमा सिद्धान्त र एजेन्डा नमिल्ने एकता र तालमेल नगर्दा राम्रो हुने सुझाव दिएका छन् विश्लेषकहरुले । मान्लान् ?
अन्तमा लेखक, कवि, गीतकार शेखर ढुंगेलको एउटा प्रश्न
कसैले स्पस्ट पारिदिनुहुन्छ कि ? मेरो अज्ञानतालाई ?
विवाह गर्ने हतपतमा केटी माग्न बिर्सियो – यो नेपाली शिक्षाप्रद उखान हो । प्रचण्डजीले यो सुन्न भएको रहेनछ । किन भने बैशाख ३१ गते चुनाव सम्पन्न भएर जेष्ठ १ र २ गतेभित्र स्थानीय पदाधिकारी चुनिन्छन् । अर्को चरणको निर्वाचनबाट पनि स्थानीय तहका पदाधिकारी चुनिएर आउनेछन् तर शपथग्रहण गरेर काम गर्ने ऐन नै बिनसकेको छैन । अन्य ऐनहरु पनि निर्माण हुनै बाँकी छन् । यदि यो कुरो सत्य हो भने सरकारको यो गैह्र जिम्मेवारी वा लापरवाहीलाई के भन्ने अब .....?